के तपाइँले बाटोमा भेटेको पैसा टिप्नु भएको छ ? जान्नुहोस् यसको धार्मिक परिणाम – Namaste Host
March 4, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on के तपाइँले बाटोमा भेटेको पैसा टिप्नु भएको छ ? जान्नुहोस् यसको धार्मिक परिणाम
तपाइँले बाटोमा हिडिरहेको बेलामा पैसा भेट्नु भएको छ? टिप्नु पनि भएको होला ? यस्तो पैसा भेट्नुलाई कतिले शुभ र कतिपयले अशुभको रुपमा लिने गरेका छन् ।
भेटिएको पैसालाई कसैले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कतिपयले भेटिएको पैसा खर्च गर्न नहुने भन्दै धार्मिक स्थलमा दिने वा धार्मिक काम गर्ने गरेका छन् भने केहीले भेटिएको पैसा दान दिने गरेका छन् ।
हिन्दू धर्म दर्शनको मान्यता अनुसार सिक्का पैसा भेट्नु र नोट भेट्नुका फरक फरक अर्थ रहेका छन् ।
जमिनमा फेला परेको सिक्का पैसाको सम्बन्ध आध्यात्मिकतासँग छ प्रतिकात्मक रुपमा कुरा गर्ने हो भने धनको अर्थ शक्ति, सत्ता र मूल्यसँग छ ।यसको सम्बन्ध इतिहासका साथ पनि छ किनकी यो एक अर्कासँग पुग्छ ।
जो व्यक्तिले भेटिएको सिक्का आफ्ना हातमा लिन्छ उसको शरीरको उर्जा त्यस सिक्काको माध्मबाट अर्को व्यक्तिसम्म पुग्छ। एक बाट अर्कोमा यो श्रृंखला बढ्दै जान्छ ।हरेक व्यक्तिको उर्जा त्यस सिक्कामा पुग्ने गर्छ । र विस्तारै विस्तारै मानिसको उर्जा त्यस सिक्कामा संग्रह हुँदै जान्छ ।
चीनमा सिक्कालाई किनमेलको बस्तुमात्र नभएर गुडलकको रुपमा पनि हेरिन्छ भने, नेपाल र भारतमा धनलाई लक्ष्मीसँग जोडेर पनि हेरिने गरिएको छ । यसर्थ अप्रत्याशित रुपमा पाइने पैसालाई राम्रो मानिने गरिएको छ ।
यसको सम्बन्ध परलौकिक शक्तिकासाथ पनि छ । सिक्काको माध्यमबाट तपाईलाई यस्तो जानकारी दिन चाहन्छ कि तपाई स्वयंलाई कम नआक्नुहोस् । यदी तपाईले आफ्नो आत्मविश्वास गुमाउनु भएको छ भने त्यसलाई जीवित गर्ने कोसिस गर्नु भन्ने संकत प्रदान गर्छ ।
यो अर्को कुराको पनि संकेत हो । शायद तपाईका पूर्खा यी सिक्काको माध्यमबाट आफ्नो आशिर्वात पुर्‍याउन खोजिरहेका हुनसक्छन् ।तपाईले नोट या सिक्का भेट्नुभयो भने यो दुई कुरामा आधारित हुन्छ ।
पहिलो, पैसा भेटेको समयमा तपाईको दिमागमा के चलिरहेको थियो र दोस्रो तपाईले नोट फेला पर्नुभयो कि सिक्का ?
यदी तपाईले सिक्का फेला पार्नुभएको छ भने यसको समबन्ध नयाँ कामको शुरुवातसँग छ ।
यदी तपाई कुनै नयाँ योजनालाई साकार पार्न चाहिरहनुभएको छ भने त्यसका लागि सही समय आएको छ । यो सफलता, प्रगति तथा उपलव्धिको निशानी हो ।आकाशीय शक्ति तपाईलाई बताउन चाहिरहेको हुन्छ कि तपाइृको मस्तिष्कमा जो विचार आइरहेको छ त्यसलाई सफलता तर्फ लैजान खोजिरहेको छ ।
यदी तपाईले नोट फेला पार्नु भयो भने यसको अर्थ तपाईले आफ्नो परिस्थितिलाई गम्भीरताका साथ हेर्न जरुरी छ । आफूमाथि विश्वास गर्दै निर्णयलाई कार्यरुप दिन जरुरी छ।
धार्मिक ग्रन्थहरुको सहयोगमा
पारस र हिमानीका छोरीहरु देखिए यस्तो पहिरनमा, कपडाबारे टिप्पणी गर्नेलाई दिइन् पूर्णिकाले यस्तो जवाफ
विवाहभन्दा महँगो बने बलिउडका यी ५ सम्बन्ध विच्छेद